တရုတ် LED သံမဏိထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ၏မီးဖိုချောင် faucet | Chengpai
LED မီးဖိုချောင် faucet အစွန်းအထင်း ...
မျက်နှာကျက်တပ်ဆင်ထားသော LED retangu ...
LED မီးခေါင်းနှင့်အတူ ...
သံမဏိ၏ LED မီးဖိုချောင် faucet
မော်ဒယ်နံပါတ် က CP-F22
ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်း သံမဏိ 304
function ကို ရေအေးနှင့်ရေပူ
အမျိုးအစား မီးဖိုချောင် faucet
၁ ။ Thတောက်ပသော LED မီးဖိုချောင်ဖြစ်သည် faucet ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ် အရည်အသွေးမြင့်မားဌead-fRee 304 သံမဏိ၎င်းသည် ၀ တ်မှုန်ဝါးအောင်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။ အဆိုပါ faucet မှမကြာခဏပျက်စီးခြင်း၏ပြtheနာကိုလျှော့ချ, .
၂ ။ ဒီမီးဖိုချောင် faucet အတွက် fixed LED ။ဒါဟာ ပါဝါမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ရေအားလျှပ်စစ်ကိုအသုံးပြုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ပါဝါ။ ဘယ်အချိန်မှာ ရေသည်စီးထွက်သွားပြီးအလင်းထွက်လာသည်။ စုပ်ယူသည့်ရေပိုက်မှရေထွက်လာသောအခါရေအပူချိန်နှင့်အညီအလင်းရောင်ပြောင်းပါလိမ့်မည်။
32 ℃ ~ 42 is ဖြစ်တဲ့အခါအမြဲတမ်းအစိမ်းရောင်;
၄၃ ℃ ~ ၅၀ is ဖြစ်သည့်အခါ၎င်းသည်အနီရောင်အမြဲရှိသည်။
ရေအပူချိန်≥51℃ဖြစ်သောအခါ၎င်းသည်အနီရောင်ဖြစ်ပြီး flash ဖြစ်သည်။
၃ ။ မြင့်မားသော arched spout ဒီဇိုင်းကို 360 °လှည့်နိုင်ပါတယ်, နစ် workpla အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးစွမ်းသည်ce, ချောမွေ့သောလည်ပတ်မှု၊,မီးဖိုချောင်ထဲမှာအမျိုးမျိုးသောစုပ်လှုပ်ရှားမှုများပိုမိုအာကာသပေး။
၄ ။ The ၉၀ ဒီဂရီတစ်ခုတည်းလီဗာလက်ကိုင်သည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုအတွက်ချောမွေ့သောရေစီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်သံမဏိယို - အဆို့ရှင်ပေးထားသည်။ စက်ရုံမှမထွက်ခွာမီ ၁၀၀% စစ်ဆေးမှု။ ချောမွေ့စွာဒီဇိုင်းကိုသေချာ nLe ယိုစိမ့်မှု, no dငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ်, nအိုးမဲ့အိမ်မဲ့။
၅ ။ Tသူရေထွက်ပေါက်သည်ရေမဖြည့်ဘဲရေကိုအတူတကွစုဆောင်းပြီးဘုံပိုင်ရေချောမွေ့မှုကိုပြသသည်။ လှပသောခါးဆစ်များ၊ ချောချောမွေ့မွေ့အသွင်အပြင်၊ ဖျာအနက်ရောင်သုတ်ဆေးသည်သံချေးမတက်စေရန်ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။
၆ ။ ပွတ်သို့မဟုတ် brushed နှင့်အတူရရှိနိုင် finish ကို။ The brushed တည်ဆောက်ပုံနှင့်ကြာရှည်ခံသောကြွေထည်ပြားသည်ချောမွေ့စွာလည်ပတ်စေသည်Sမည်သည့်မီးဖိုချောင်အပြင်အဆင်ကိုစတိုင်ကျစေသော leek နှင့်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း၊ ပြီးနောက်အခြားချထားတဲ့ finish ကိုတူအခွံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအများကြီး နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
၇ ။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်လေ ၀ င်လေထွက်စီးဆင်းစေခြင်း။ အစွမ်းထက်သုတ်ခြင်း။
၈ ။ အပေါ်ပိုင်းကို ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်။ ချောမွေ့သောလည်ပတ်မှု၊, sတစ်ခုတည်းနှင့်နှစ်ဆအင်တုံမီးဖိုချောင်စုပ်များအတွက် uitable ။
၉ ။ ထို့အပြင်အရည်အသွေးရှိသည့်အရာတစ်ခုကိုပုံသေတပ်ဆင်ထားသည်၊ ကြာရှည်စွာ၊ ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်စေသည်။
၁၀ ။ ခိုင်မြဲစွာထုပ်ပိုး: PE အိတ်နှင့်ပုံး
၁၁ ။ လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်း,standard ဒီဇိုင်းကိုတောင်ပေါ်မှာ တစ်ပေါက်တည်း နစ်မြုပ်သို့မဟုတ်ကောင်တာ။ဟုတ်တယ် ရေပိုက်ပြင်သူများနှင့်အထူးကိရိယာများမလိုအပ်ဘဲရိုးရှင်းသောအဆင့်များ၌တပ်ဆင်ထားသည်.
ရှေ့သို့ မျက်နှာကျက် LED retangular ရေချိုးခန်းခေါင်းကို
မီးဖိုချောင် Faucet ခေါင်း
သံမဏိနှစ်ထပ်ခွက် weilding မီးဖိုချောင်စုပ် ...
Faucet ယိုစိမ့်မှု၏ Maintenance Method ကို
Shower Panel VS လက်ဖြင့်ရေပန်းခေါင်း
No.9 Zhongzhen လမ်း၊ Luocun၊ Shishan မြို့၊ Nanhai ခရိုင်၊ Foshan City, Guangdong Province, China ။